Tue, May 26, 2020 at 7:35pm
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयर बजार, परिसूचक ३६ अंकले वृद्धि भएर १ हजार २ सय २४ बिन्दुमा !
काठमाडौँ, २१ असार शेयर बजार बिहिबार दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । शेयर बजारको मापक नेप्से परिसूचक ३६.०१ प्रतिशतले वृद्धि भएर एक हजार २२४.४१ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापक परिसूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्ससमेत ७.५१ बिन्दुले बढेर २५७.४६ बिन्दुले बढेको छ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको बजारमा बिहिबार भने सबै उपसूचकमा हरियाली छाएको छ । सबै उपसूचकमा हरियाली छाएर साताको..
सामान्य अंकले बढ्यो धितोपत्र बजार, परिसूचक ८ बिन्दुले बढेर १ हजार १ सय ८८ बिन्दुमा !
काठमाडौँ, २० असार बुधबार सेयर बजारमा आठ अंकको सुधार आएको छ। नेप्से परिसूचक ८ अंकले वृद्धि भई ११८८ अंकमा कायम भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा पाइने कर्जाको सीमा बढ्ने हल्लाका भरमा यस दिन बजार उक्लेको हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ। यस दिन १६९ कम्पनीको २५ करोडको सेयर किनबेच भयो। बजारको पुँजीकरण १४ खर्ब ५ अर्ब..
सामान्य अंकले बढ्यो शेयर बजार, ०.६५ बिन्दुले बढेर १ हजार १ सय ८० बिन्दुमा पुग्यो
काठमाडौँ, १९ असार लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार मंगलबार भने सामान्य बिन्दुले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार शेयर बजार मापक परिसूचक नेप्से ०.६५ बिन्दुले बढेर एक हजार १८०.३६ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापक परिसूचक सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.२२ बिन्दुले बढेर २४८.२५ बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार कूल १६२ कम्पनीको नौ लाख १५ हजार १३६ कित्ता..
५ अंकले घट्यो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक १ हजार १ सय ७९ अंकमा कायम
काठमाडौँ, १८ असार निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजार सोमबार पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार शेयर मापक परिसूचक नेप्से सोमबार ४.८२ बिन्दुले घटेर एक हजार १७९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.४३ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । सोमबार कूल १५९ कम्पनीको छ लाख ७२ हजार १०३ कित्ता शेयर रु २० करोड ४५..
रकम अभाव भएका कारण रसुवावासीको शेयर वितरण प्रक्रिया स्थगन
रसुवा, १८ असार निर्माणाधीन साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट रसुवावासीले पाउने १० प्रतिशत शेयर वितरणको प्रक्रिया स्थगन भएको छ । रसुवाका सबै जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच सोमबार भएको छलफलले रसुवावासीसँग रकम अभाव भएका कारण विद्युत् उत्पादन नभएसम्मका लागि जिल्लावासीले पाउने शेयरको वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । रसुवावासीका लागि १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने कानूनी..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, १४ अंकले ओरालो लागेर १ हजार १ सय ८४ बिन्दुमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, १७ असार निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजारको नेप्से परिसूचक आइतबार पनि दोहोरो अंकले घट्यो । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १४.०१ प्रतिशतले ओरालो लागेर एक हजार १८४ बिन्दुमा आइपुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापक परिसूचकसमेत २.९७ बिन्दुले घटेर २४९.१२ बिन्दुमा ओर्लेको छ । आइतबार कुल १५८ कम्पनीको छ लाख १९ हजार ७४१ कित्ता शेयर रु १९ करोड..
४ अंकले बढ्यो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक १ हजार १ सय ९९ अंकमा कायम
काठमाडौँ, १३ असार बुधबार नेप्सेमा ४ अंकको सुधार आएको छ। अघिल्लो दिन १५ अंकले झरेको नेप्से बुधबार ४. ६ अंकले बढेसँगै ११९९ अंकमा कायम भएको छ। कुल १५७ कम्पनीको १७ करोड ३० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भयो। बजारको पुँजीकरण १४ खर्ब १८ अर्ब कायम भएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको भन्दा ६ करोडले कमी हो। मंगलबार २३ करोड १० लाख रुपैयाँको कारोबार..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक १५ अंकले घटेर १ हजार १ सय ९४ बिन्दुमा
काठमाडौँ, १२ असार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १२ सय अंकमुनि झरेको छ। अघिल्लो दिनभन्दा १५ अंकले कमी आएको नेप्से ११ सय ९४ अंकमा अडिएको छ। कुल १६० कम्पनीको २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो। यस दिन सबै समूहहरु ओर्लिएका छन्। बैंकिङ १२, होटल ५२, विकास बैंक १४, जलविद्युत ११, फाइनान्स ५, बिमा ७८, उत्पादन ५०, अन्य ५ र माइक्रोफाइनान्स..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक १० अंकले घटेर १ हजार २ सय १० बिन्दुमा
काठमाडौँ, ११ असार शेयर बजार करीब १० अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ९.७२ अंकले घटेर एक हजार २१० बिन्दुमा आइपुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयरको मापन गर्ने सन्सेटिभ परिसूचकसमेत २.०७ बिन्दुले घटेर २५३.९७ बिन्दुमा पुगेको छ । सोमबार कूल १५८ कम्पनीको पाँच लाख ७४ हजार ७८१ कित्ता शेयर रु १८ करोड ५१ लाख ७०..
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षाले केही दिनयता शेयर बजार सुस्तायो !
काठमाडौँ, १० असार राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहँदा विगत केही दिनयता सेयर बजार सुस्ताएको छ। बजारको परिसूचकमा न्यून अंकको उतारचढाव देखिएको छ। मौद्रिक नीतिले लिन सक्ने लक्ष्यप्रति लगानीकर्ता पर्खेको देखिन्छ। जसले गर्दा परिसूचक स्थिरजस्तै देखिएको छ भने कारोबार पनि न्यून भएको छ। बिहीबार एक अंकमुनि हरियो रहेको नेप्से आइतबार १. ८९ अंकले मात्रै बढ्यो। परिसूचकको उतारचढाव मात्रै होइन कारोबार रकम पनि बढ्न..
साताभर १ अर्ब बढीको शेयर कारोबार, ४९ लाख ६१ हजार ११० कित्ता खरिद बिक्री
काठमाडौँ, ९ असार : धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब १२ करोड ३१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार यस साता कूल ४९ लाख ६१ हजार ११० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३४.७२ प्रतिशत कम हो । गत साता १८६ कम्पनीको ४८ लाख ६८ हजार ७० कित्ता शेयर रु..
पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर निष्काशन गर्ने
बेनी, म्याग्दी, ८ असार अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले घलेम्दी आयोजनालाई पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि साधारण शेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत अर्थात् रु पाँच करोड ५० लाखबराबरको पाँच लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर..
९ अंकले घट्यो शेयर बजार, परिसूचक ओर्लिएर १ हजार २ सय २६ अंकमा कायम
काठमाडौँ, ५ असार सेयर बजार मंगलबार करिब ९ अंकले घटेको छ। ८.९७ अंकले ओर्लिएर नेप्से १२२६ अंकमा कायम भएको छ। १५७ कम्पनीको २० करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भयो। बजारको पुँजीकरण १४ खर्ब ४६ अर्ब कायम भएको छ। यस दिन सबै समूहहरु ओर्लिएका छन्। बैंकिङ ५, होटल ८, विकास बैंक १४, जलविद्युत २, फाइनान्स ३, बिमा ९३, उत्पादन १९, अन्य ३..
सामान्य अंकले बढ्यो धितोपत्र बजार, परिसूचक १ बिन्दुले बढेर १ हजार २ सय ३५ बिन्दुमा !
काठमाडौँ, ४ असार धितोपत्र बजार सोमबार सामान्य अंकले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.९२ बिन्दुले बढेर एक हजार २३५ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गमा कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.४२ बिन्दुले बढेको छ । सोमबार कूल १५४ कम्पनीको चार लाख ८४ हजार ६४५ कित्ता शेयर रु १९ करोड ५२ लाख ३४ हजार १२६ मूल्यमा खरिद..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, नेप्से परिसुचकमा १४ अंकको गिरावट
काठमाडौं, ३ असार साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसुचक १४.०७ अंकले गिरावट आएको छ । २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भनन बढीको कारोबार भएको आजको बजार १२३.२३ अंकमा आएर अडिएको हो । आजको कारोबारमा १५८ कम्पनी सामेल थिए । होटल समुह बाहेक सबै समुहमा गिरावट आएको छ । होटल समुहमा भने २८.९५ अंकको बढोत्तरी भएको हो । सबैभनदा बढी बिमा समुह ७२.४ अंकले..
शेयर बजार: एक अर्ब बढीको कारोबार, विभिन्न छ कम्पनीका शेयर सूचीकृत
काठमाडौँ, २ असार धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब ७२ करोड पाँच लाख ६६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाअनुसार यस साता कूल ४८ लाख ६८ हजार ७० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा दुई दशमलव १४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७९ कम्पनीको ४० लाख २६ हजार ८१० कित्ता..
घट्यो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक २ बिन्दुले घटेर एक हजार २ सय ३९ बिन्दुमा कारोबार
काठमाडौँ, २९ जेठ सोमबार केही बढेको शेयर बजार आज भने सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.९३ बिन्दुले घटेर एक हजार २३९.२६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.६४ बिन्दुले घटेर २६०.४७ बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार कूल १६० कम्पनीको नौ लाख ४७ हजार ३९३ कित्ता शेयर रु २९ करोड ९० लाख ९३..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, २५ अंकले घटेर १ हजार २ सय ३१ बिन्दुमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, २७ जेठ साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से २५ अंकले झरेको छ। कुल १६२ कम्पनीको ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। परिसूचक १२३१ अंकमा अडिएको छ भने बजारको पुँजीकरण १४ खर्ब ५३ अर्बमा कायम भएको छ। यस दिन सबै समूहहरु ओर्लिएका छन्। बैंकिङ १९, होटल ५४, विकास बैंक २२, जलविद्युत २७, फाइनान्स ५, बिमा २१७, उत्पादन २७, अन्य..
काठमाडौँ, २६ जेठ धितोपत्र बजारमा यस साता १७९ कम्पनीको रु एक अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ६ हजार मूल्य बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाअनुसार यस साता ४० लाख २६ हजार ८१० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १९ दशमलव ३० प्रतिशत कम हो । गत साता १८३ कम्पनीको ४७ लाख ४४ हजार..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार,२६ अंकले घटेर १ हजार २ सय ५७ बिन्दुमा
काठमाडौँ, २४ जेठ बुधबार बढेको शेयर बजार बिहिबार भने २५.६८ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेर एक हजार २५७.०७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ५.४७ बिन्दुले घटेको छ । बिहिबार कूल १६६ कम्पनीको १४ लाख ४१ हजार २७७ कित्ता शेयर रु ४६ करोड ८५ लाख ६० हजार ३४९..
लाभकरमा सरकार पछि हट्दा नेप्से परिसूचक १४ अंकले बढ्यो
एजेन्सी, २३ जेठ पुँजीगत लाभकरको गणना विधिमा सरकार पछि हटेपछि नेप्से परिसूचक बढेको छ। हकप्रद र बोनसमा अंकित मूल्यलाई आधार बनाएर लाभकर लिने निर्णय सरकारले स्थगित गरेपछि नेप्से बुधबार १४ अंकले बढेको छ। १३.९१ अंकको वृद्धिसँगै परिसूचक १२८२ अंकमा कायम भएको छ। अघिल्लो दिन बन्द भएको सेयर कारोबार बुधबार २ घण्टा मात्रै भयो। १ बजेबाट ३ बजेसम्म भएको कारोबारमा १३८ कम्पनीको सेयर किनबेच..
लगानीकर्ताको विरोधका कारण शेयर बजार प्रभावित, पूँजीगत लाभकर बिरुद्द आन्दोलन !
काठमाडौँ, २२ जेठ हकप्रद तथा बोनस शेयरमा पूँजीगत लाभकर लगाइएको भन्दै लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिएपछि मंगलबार शेयर कारोवार प्रभावित भएको छ । लगानीकर्ताको अवरोधपछि शेयर ब्रोकरले कुनै कारोवार नगर्दा नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा कुनै पनि कारोवार हुन सकेन । सरकारले शेयर कारोवारमा सोमबारदेखि पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । लगानीकर्ताले स्टकको कार्यालयमा पुगेर विरोध जनाएका थिए । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले..
पाँच अंकले खस्कियो सेयर बजार परिसूचक, १ हजार २ सय ६८ अंकमा कायम !
काठमाडौँ, २१ जेठ सोमबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ५ अंकले खस्किएको छ। पौने १ बजेतिर हरियो अंकमा देखिए पनि नेप्से १ बजेपछि पुनः ओर्लियो। सोमबारको कारोबारपछि नेप्से १२६८ अंकमा कायम भएको छ। १५८ कम्पनीको ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो। अन्य बाहेकका सबै समूहहरु ओर्लिएका छन्। अन्य समूह भने २४ अंकले बढ्यो। बैंकिङ ६, व्यापार २, होटल २८, विकास बैंक ५, जलविद्युत..
दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, ३३ अंकले ओरालो लाग्दै १ हजार २ सय ७३ अंक कायम
एजेन्सी, २० जेठ आइतबार सेयर बजार ३३ अंकले ओर्लिएको छ। सरकारले पुँजीगत लाभकर गणनाका लागि बोनस र हकप्रदको अंकित मूल्य नै कायम गरेर आधार मूल्य तय गर्न निर्देशन दिएपछि सेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट आएको हो। पुँजीगत लाभकर बढाएको सरकारले लाभकरका लागि बढी रकम गणना गर्न मिल्नेगरी घुमाउरो रणनीति लिएको हो। जसले गर्दा आइतबार नेप्से कुनै पनि क्षणमा हरियो हुन सकेन। ३३. ७१ अंकले..
दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार, १४ अंकले घटेर परिसूचक १ हजार ३ सय ७ अंकमा कायम
काठमाडौँ, १७ जेठ साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से दोहोरो अंक घटेको छ । १४ दशमलव ६१ अंक घटेर परिसूचक १३०७ दशमलव ६६ मा कायम भएको छ । एक सय ६५ कम्पनीका सात लाख ८ हजार एक सय ४७ कित्ता सेयर चार हजार एक सय ५९ पटक खरिदबिक्री हुँदा ३४ करोड ५९ लाख १४ हजार पाँच सय पाँच रुपैंयाको कारोबार भएको छ ।..
एक अर्ब बढीका सबै कम्पनी अनिवार्य सेयर बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ, १६ जेठ सरकारले रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पूँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्डलगायतका नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने उल्लेख गरे। बजेटमा नेपाल क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई..
दोहोरो अंकले बढ्यो सेयर बजार, बजेट आउनुअघि ३६ अंकको छलांग !
काठमाडौँ, १४ जेठ बजेट आउनु एक दिनअघि सेयर बजार करिब ३६ अंकले बढेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आय व्यय विवरण मंगलबार सार्वजनिक गर्दैछ। सोमबार बजार ३५. ९ अंकले बढेर १३३६ अंकमा कायम भएको छ। जेठ ३ गतेयता सेयर बजार अघिल्लो दिनसम्म निरन्तर झरेपछि सस्तो मूल्यमा खरिद गर्नेहरु सोमबार बढी सक्रिय देखिए। त्यस्तै बजेटले सेयर बजारका विषयमा केही सम्वोधन गर्न सक्ने अनुमानका..
शेयर बजार: धितोपत्र बजारमा यस साता अर्ब बढीको कारोबार भयो
काठमाडौँ, १२ जेठ धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब ९२ करोड २७ लाख ३१ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कूल १८३ कम्पनीको ४१ लाख ३७ हजार ४३० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । कारोबार रकम गत साताकोभन्दा ७७ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७६ कम्पनीको २३ लाख २९ हजार ४४० कित्ता शेयर रु..
बुटवल पावरले ४४ करोड लाभांश वितरण गर्ने, कम्पनीमा ८८ हजार शेयरधनी
काठमाडौँ, ८ जेठ : बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले आफ्ना शेयरधनीलाई करीब रु ४४ करोड नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको आज सम्पन्न २५औँ वार्षिक साधारणसभाले उक्त लाभांश पारित गरेको हो । कम्पनीले केही समय पहिले एफपिओ बिक्री गरेपछि चुक्ता पुँजी रु दुई अर्ब २१ करोड पुगेको छ । कम्पनीमा ८८ हजार शेयरधनी छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४..
शेयर बजार फेरि घट्यो, ४.३१ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक एक हजार ३३२.८२ बिन्दुमा
काठमाडौँ, ८ जेठ निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार मंगलबार पुनः ४.३१ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक एक हजार ३३२.८२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार ‘क’ वर्गका शेयर कारोवारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत एक अंकले घटेको छ । कूल १६० कम्पनीको १० लाख ४७ हजार ८४३ कित्ता शेयर रु ५३ करोड ८६ लाख नौ हजार ३८९ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको..
Results 589: You are at page 16 of 20